दार्जीलिङ्ग - विकिपीडिया
(दार्जिलिङ्ग बाट पठाईएको)
दार्जीलिङ्ग भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा रहेको एउटा नगर हो। यो दार्जीलिङ्ग जिल्लाको सदरमुकाम हो । यो नगर महाभारत पहाड भागमा अवस्थित छ। यहाँको औसत उचाई २,१३४ मिटर (६,९८२ फिट) छ। दार्जीलिङ्ग शब्दको उत्त्पत्ति दुई तिब्बती शब्द, दोर्जे (च्याटयाङ) र लिंग (स्थान) बाट भएको हो । यसको अर्थ "च्याटयाङ स्थान हो।"  भारतमा बेलायती शासनको बेला अनुकूल मौसमको कारणबाट यस ठाउँलाई हिल स्टेसन बनाइयो । बेलायती रेसिडेन्ट्स यहाँ ग्रीष्म मौसमको गर्मीबाट छुट्कारा पाउनको लागि यहाँ आउने गर्दथे।
अन्तराष्ट्रिय स्तरमा दार्जीलिङ्ग चियाको लागि प्रसिद्ध छ । दार्जीलिङ्ग दार्जीलिङ्ग हिमालयन रेलवे एउटा युनेस्को विश्व सम्पदा स्थल तथा प्रसिद्ध स्थल हो। यहाँको चियाको खेती सन १८००को मध्यबाट शुरु भएको थियो । यहांको चिया उत्पादकहरूले कालो चिया र फर्मेन्टिंग प्रविधिको एक सम्मिश्रण तयार गरेका छन् जो विश्वको सर्वोत्कृष्टमा एक हो।  दार्जीलिङ्ग हिमालयन रेलवे जो दार्जीलिङ्ग नगरलाई समथर स्थलसग जोड्द छ , यसलाई विश्व सम्पदा स्थल १९९९मा घोषित गरिएको थियो । यो वाफबाट सञ्चालन हुने यन्त्र भारतमा एकदमै कम देख्न पाइन्छ ।
दार्जीलिङ्गमा केही बेलायती शैलीका सार्वजनिक विद्यालय पनि छन, जसले भारत र नेपालबाट धेरै विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्दछ । यो सहर र यसको नजीकको कालिम्पोङ सहर सन १९८०मा गोरखाल्याण्ड राज्यको माग गर्ने प्रमुख स्थानहरू थिए। एउटा स्वायत्त शासन पार्वत्य परिषद्को स्थापनाबाट केही वर्ष शान्त रहेको यो स्थान पुन गोर्खाल्याण्ड राज्यको मागमा आन्दिलोनरत छ । यहाँको वातावरण ज्यादा पर्यटक र अव्यवस्थित सहरीकरणको कारणले केही बिग्रिरहेको छ ।
३ शाक्‍य मठ
२४ सन्दर्भ सामाग्री
२५ बाहिरी सूत्र
यो स्‍थानको खोज त्यस समय भयो जब आंग्‍ल-नेपाल युद्धको समयमा एक ब्रिटिश सैनिक टुक‍डी सिक्किम जानको लागि छोटो बाटोको खोजीरहेको थिए । यस बाटोबाट सिक्‍िकमसम्म सजिलै जान सक्ने कारण यो स्‍थान बेलायतीको लागि रणनैतिक रूपमा धेरै महत्‍वपूर्ण थियो । यसको अलावा यो स्‍थान प्राकृतिक रूपमा पनि धेरै नै संपन्‍न थियो। यहांको ठण्‍डा वातावरण तथा हिमपात बेलायतीको आकर्षण थियो। यसको कारण बेलायतीहहरू बिस्तारै बिस्तारै यहाँ बस्न थाले।
प्रारम्भमा दार्जीलिङ्ग सिक्किमको एक भाग थियो। पछि भूटानले यस माथि कब्‍जा गर्‍यो। तर केही समय पछि सिक्किमले यस मथि पुन: कब्‍जा गर्‍यो । तर १८ औ शताब्‍दीमा पुन: यसलाई नेपालको हातमा गुमायो। तर नेपालले पनि यस माथि ज्‍यादा समयसम्म अधिकार राख्न सकेन। सन १८१७मा अङ्ग्रेज-नेपाल युद्दमा हारे पछि नेपालले यो भाग ईस्‍ट इण्डिया कंपनीलाई सुम्पनु पर्‍यो।
आफ्नो रणनैतिक महत्‍व तथा तत्‍कालीन राजनैतिक स्थितिको कारण सन १८४० तथा ५०को दशकमा दार्जिलिंग एउटा युद्ध स्‍थलको रूपमा परिणत भएको थियो। त्यस समय यो ठाउ विभिन्‍न देशको शक्‍ित प्रदर्शन स्‍थल बनिसकेको थियो। पहिला तिब्‍बतका मानिस यहाँ आए। त्यसपछि यूरोपिय मानिसहरू आए। यसपछि रुसका मानिसहरू यहाँ बसे। यी सबलाई अफगानिस्‍तान का अमीरले त्यहाँदेखि भगाएका थिए। यो राजनैतिक अस्थिरता त्यसबेला समाप्‍त भयो जब अफगानिस्‍तानका अमीर अङ्गेजहरूसँग भएको युद्धमा हारे। यसपछि यसमा अङ्ग्रेजहरूको कब्‍जा थियो। पछि यो जापानी, कुमितांग तथा सुभाषचंद्र बोसको इण्डियन नेशनल आर्मीको पनि कर्मस्‍थल बन्यो। स्‍वतन्त्रता पछि ल्‍हासाबाट भागेका बौद्ध भिक्षु यहाँ आएर बसे।
यस बेला, दार्जिलिंग पश्‍िचम बंगालको एक भाग हो। यो शहर 3149 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। यो शहर त्रिभुगएर छ। यसको उत्तरी भाग नेपाल र सिक्किमसग जोडिएको छ। यहाँ शरद ऋतु अक्‍टूबरदेखि मार्चसम्म हुदछ। यस मौसममा यहाँ धेरै चिसो हुदछ। यहाँ ग्रीष्‍म ऋतु अप्रिलदेखि जून सम्म रहन्छ। यस समयको मौसम हल्‍का चिसो हुँदछ। यहाँ वर्षा जूनदेखि सितम्‍बरसम्म हुँदछ। ग्रीष्‍म कालमा नै यहाँ धेरै पर्यटक आउँदछन्।
मुख्य आकर्षण [सम्पादन गर्ने]
यो सहर पहाडको चुचुरोमा स्थित छ। यहाँ सडको जाल बिछाईएको छ। यि सडकहरू एक अर्कोसग जोडिएको छ । यि सडकहरूमा घुम्दै जादा तपाईलाई औपनिवेशिक कालमा बनेको थुप्रै घरहरू देखा पर्ने छन्। यि घरहरू आज पनि धेरै नै आकर्षक देखिन्छ। यि घरहरूमा लगाइएको पुरानो झाल तथा धुवा नेस्कन बनाइएको चिमनीले पुरानो समयको झझल्को दिन्छ । तपाईं यहाँ चिहान, पुरानो स्‍कूल भवन तथा चर्चें पनि देख्न सक्नुहुन्छ। पुरानो समयको घरहरूको साथ-साथै तपाईलाई यहाँ वर्तमान कालको कंकरीटले बनेको भवन पनि देख्नुहुने छ । पुरानो र नया भवनहरूको मेल यस सहरलाई एउटा खास सुंदरता प्रदान गर्दछ ।
शाक्‍य मठ [सम्पादन गर्ने]
यो मठ दार्जिलिंगबाट आठ किलोमीटरको दूरीमा स्थित छ। शाक्‍या मठ शाक्‍य सम्‍प्रदायको धेरै नै ऐतिहासिक र महत्‍वपूर्ण मठ हो। यस मठको स्‍थापना सन 1915मा गरीको थियो। यसमा एउटा प्रार्थना कक्ष पनि छ। यस प्रार्थना कक्षमा एक साथ्‍ा ६० जना बौद्ध भिक्षु प्रार्थना गर्न सक्दछन।
द्रुक-थम्‍बटेन-सांगग-चोलिंग-मठ [सम्पादन गर्ने]
११ औ गेलवांग द्रुकचन तेंजिन खेनरब जिलग वांगपोको मृत्‍यु सन 1960 भएको थियो । यिनैको सम्झनामा यस मठको स्‍थापना सन 1971मा गरीको थियो । यस मठको बनावट तिब्‍बतियन शैलीमा गरीको थियो। पछि यस मठको पुननिर्माण सन 1993मा गरियो । यसको अनावरण दलाई लामाले गरेका थिए।
माकडोग मठ [सम्पादन गर्ने]
यो मठ चौरास्‍तादेखि तीन किलोमीटरको दूरीमा आलूबरी गांउमा छ। यो मठ बौद्ध धर्मको योलमोवा संप्रदायसग संबंधित छ। यस मठको स्‍थापना श्री संगे लामाले गरेका थिए। संगे लामा योलमोवा सम्प्रदाय के प्रमुख थिए। यो एउटा सनो सम्‍प्रदाय हो जो पहले नेपालको पूवोत्तर भागमा बस्दथे। तर पछि यस सम्‍प्रदायका मानिसहरू दार्जिलिंगमा आएर बसे। यो मठको निर्माण कार्य सन १९१४मा पूरा भएको थियो। यस मठमा योलमोवा सम्‍प्रदायका मानिसहरूको सामाजिक, सांस्‍‍कृतिक, धार्मिक पहचानलाई दर्शाउने पूरा प्रयास गरीको छ।
जापानी मंदिर (पीस पैगोडा) [सम्पादन गर्ने]
विश्‍वमा शान्ति ल्याउनको लागि यस स्‍तूपको स्‍थापना फूजी गुरु गरेका थिए है। उनी महात्‍मा गांधीका मित्र थिए। भारतमा जम्मा ६: शान्ति स्‍तूप छ। निप्‍पोजन मायोजी बौद्ध मन्दिर जुन दार्जिलिंगमा छ,त्यस मध्ये यो एक हो। यस मंदिरको निर्माण कार्य सन 1972मा शुरु भएको थियो । यो मन्दिर १ नोभेम्बर १९९२मा सर्बसाधारणको लागि खोलिएको थियो । यस मंदिरबाट पूरै दार्जिलिंग और कंचनजंघा हिमालको अति सुंदर दृश्य देख्न सकिन्छ।
टाइगर हिल [सम्पादन गर्ने]
टाइगर हिलको मुख्‍य आनंद यसको उक्लाई गर्नमा छ । तपाईलाई प्रत्येक बिहान पर्यटक यसमा चड्दै गरेको पाउनु हुने छ । यसको छेउमा कंचनजंघा चुचुरो छ । सन १८३८ देखि १८४९ सम्म यसलाई नै विश्‍वको सबै भन्दा अग्लो चुचुरो मानिन्थ्यो। तर सन १८५६मा गराईएको सर्वेक्षणबाट यो स्‍पष्‍ट भयो कि कंचनजंघा होईन बरु नेपालको सागरमाथा जसलाई अङ्गेजहरूले एवरेस्‍टको नाम दिएका थिए, विश्‍वको सबै भन्दा अग्लो चुचुरो हो । यदि तपाईं भाग्‍यशाली हुनु हुन्छ भने तपाईं टाइगर हिलबाट कंजनजंघा तथा एवरेस्‍ट दुबै चुचुरोहरू देख्न सक्नु हुनेछ । यि दुबै चुचुरोहरूको ऊंचाईमा मात्र ८२७ फीटको अन्तर छ। अहिले कंचनजंघा विश्‍वको तेस्रो सबैभन्दा उचो चुचुरो हो। कंचनजंघालाई सबैभन्दा रोमांटिक माउंटेनको उपाधिबाट सम्मानित गरीको छ। यसको सुंदरताको कारण पर्यटहरूले यसलाई यस उपाधिबाट सम्मानित गरीको हो। यस चुचुरोको सुंदरतामाथि थुप्रै कविताहरू लेखि सकिएको छ। यसको साथ-साथै सत्‍यजीत रायको चलचित्रमा यस चुचुरोलाई थुप्रै पटक देखाईएको छ।
शुल्‍क हेर्नको लागि मात्र नि: शुल्‍क, टावरमा चढनको लागि शुल्‍क रु. १०, टावरमा बस्नको लागि शुल्‍क रु. ३० । यहांसम्म तपाईं जीपद्वारा जान सक्नु हुने छ। दार्जिलिंगबाट यहांसम्म जाने र आउने भाडा रु.६५ देखि ७०को बीचमा छ।
घूम मठ (जेलूग्‍पा) [सम्पादन गर्ने]
टाइगर हिलको नजीक ईगा चोइलिंग तिब्‍बतियन मठ छ। यो मठ जेलूग्‍पा संप्रदायसग संबंधित छ्। यो मठलाई नै घूम मठको नामबाट चिनिन्छ। इतिहासकाहरूका अनुसार यस मठको स्‍थापना धार्मिक कार्यहरूको लागि होईन वरु राजनैतिक बैठकहरूको लागि गरीको थियो ।
यस मठको स्‍थापना सन १८५०मा एक मंगोलियन भिक्षु लामा शेरपा याल्‍तसूद्वारा गरीएको थियो । याल्‍तसू आफ्नो धार्मिक इच्‍छाहरूको पूर्त्तिको लागि सन १८२० तिर भारतमा आएका थिए। यस मठमा सन १९१८मा बुद्धको १५ फीट अग्लो मूर्त्ति स्‍थापित गरीको थियो। त्यस समय यस मूर्त्ति बनाउन रु.२५००० खर्च लागेको थियो । ययो मूर्त्ति एउटा मुल्यवान पत्‍थरले बनेको छ र यस माथि सुनको लेप लगाइएको छ। यो मठमा बहुमूल्‍य ग्रन्थहरूको संग्रह पनि छ । यि ग्रन्थ संस्‍कृतबाट तिब्‍बतीयन भाषामा अनुवादित छ। यि ग्रन्थहरूमा कालीदासको मेघदूत पनि सामेल छ। हिल कार्ट रोडको नजीक समतेन चोलिंगद्वारा स्‍थापित एउटा अर्को जेलूग्‍पा मठ छ। समय: सबै दिन खुला। मठको बाहिर फोटो खिच्न अनुमति छ।
भूटिया-‍‍बस्‍ती-मठ [सम्पादन गर्ने]
यो दार्जिलिंगको सबै भन्दा पुरानो मठ हो। यो मूल रूपबाट औब्‍जरबेटरी हिलमा सन १७६५मा लामा दोरजे रिंगजेद्वारा बनाईएको थियो। यो मठलाई नेपालीहरूले सन १८१५मा लुटेका थिए। यसपछि यस मठको पुनर्निमाण सन्त एण्ड्रूज चर्चको छेउमा सन १८६१मा गरेयो। अंतत: यो आफ्नो वर्तमान स्‍थान चौरासताको नजीक, भूटिया बस्‍तीमा १८७९मा स्‍थापित भयो। यो मठ तिब्‍बतियन-नेपाली शैलीमा बनेको छ। यो मठमा पनि बहुमूल्‍य प्राचीन बौद्ध सामाग्री राखिएको छ।
यहांको मखाला मन्दिर धेरै नै आकर्षक छ। यो मन्दिर त्यसै ठाउमा स्‍थापित छ जहाँ भूटिया-बस्‍ती-मठ शुरुमा बनेको थियो । यस मंदिरलाई पनि अवश्‍य घुम्नु पर्दछ। समय: सबै दिन खुला। केवल मठको बाहिर मात्र फोटो खिच्न अनुमति छ।
तेंजिंगस लेगेसी [सम्पादन गर्ने]
हिमालय माउंटेनिंग संस्‍थानको स्‍थापना सन १९५४मा गरीएको थियो । ज्ञातव्‍य होस सन १९५३मा पहिलो पटक सगरमाथा उक्लिएको थियो । तेंजिंग धेरै बर्षसम्म यसको निदेशक पदमा रहे। यहाँ एउटा पर्बतियसंग्रहालय पनि छ। यस संग्रहालयमा हिमालयमा चडन गरीएको धेरै ऐतिहासिक अभियानसग संबंधित वस्‍तुहरू राखिएको छ। यस संग्रहालयको एउटा गैलेरीलाई सगरमाथा (एवरेस्‍ट) संग्रहालयको नामबाट जानिन्छ । यस गैलेरीमा सगरमाथासग संबंधित वस्‍तुहरू राखिएको छ । यस संस्‍थानमा पर्वतारोहणको प्रशिक्षण पनि दिइन्छ।
प्रवेश शुल्‍क: रु. २५ (यसमा जैविक उद्यानको प्रवेश शुल्‍क पनि शामिल छ) टेली: ०३५४-२२७०१५८ समय: बिहान १० बजेदेखि राती ४:३० सम्म (बीचमा आधा घण्‍टा बंद)। बिहिवार बन्द।
जैविक उद्यान [सम्पादन गर्ने]
पदमाजा-नायडू-हिमालयन जैविक उद्यान माउंटेंनिग संस्‍थानको दाया पट्टी रहेको छ। यो उद्यान हिमाली चितुवा तथा रातो पान्डाको प्रजनन कार्यक्रमको लागि प्रसिद्ध छ । तपाईं यहाँ साइबेरियन बाघ तथा तिब्‍‍बतियन भेडा पनि देख्न सक्नु हुने छ।
मुख्‍य बस पार्कको तल पुराने बाजारमा लियोर्डस वानस्‍पतिक उद्यान छ । यस उद्यानलाई यो नाम मिस्‍टर डब्‍ल्‍यू. लियोर्डको नाममा राखिएको हो। लियोर्ड यहाको एउटा प्रसिद्ध बैंकर थिए जसले सन १८७८मा यस उद्यानको लागि जमीन दान दिएका थिए । इस उद्यानमा और्किटको ५० प्रजातिहरूको बहुमूल्‍य संग्रह छ। समय: बिहान ६ बजे देखि राति ५ बजेसम्म ।
यस वानस्‍पतिक उद्यानको नजीक नै नेचुरल हिस्‍ट्री म्‍यूजियम छ। यस म्‍यूजियमको स्‍थापना सन १९०३मा गरीको थियो। यहाँ चरा, सरीसृप, जंतुहरू तथा कीरा-पातको विभिन्‍न किसिमलाई संरक्षित‍ अवस्‍थामा राखिएको छ।
तिब्‍बती शरणार्थी क्याम्प [सम्पादन गर्ने]
तिब्‍बती शरणार्थी स्‍वयं सहायता केंद्र
तिब्‍बती शरणार्थी स्‍वयं सहायता केंद्र (टेली: ०३५४-२२५२५५२) चौरास्‍ताबाट ४५ मिनटको पैदल दूरीमा अवस्थित छ । यस क्याम्पको स्‍थापना सन १९५९मा गरीएको थियो । यसको एक वर्ष पहिले १९५८मा दलाई लामाले भारतसग शरण मागेका थिए । यस क्याम्पमा १३औ दलाई लामा (अहिले १४ औ दलाई लामा छन)ले सन १९१० देखि १९१२ सम्म आफ्नो निर्वासनको समय व्‍यतीत गरेका थिए। १३ औ दलाई लामा जुन भवनमा बस्दथे त्यो भवन आज भग्नाशेष अवस्‍थामा छ।
आज तिब्‍बती शरणार्थी क्याम्प ६५० तिब्‍बती परिवारको आश्रय स्‍थल हो। यि तिब्‍बतीहरू यहाँ विभिन्‍न प्रकारको सामान बेच्दछन। यि सामानहरूमा कारपेट, ऊनी कपडा, काठको कलाकृतिहरू, धातुले बनेको खेलौना लगायत छन । तर तपाईं यो तिब्‍बती शरणार्थी क्याम्प घूमेर आनन्‍द लिन चाहानु हुन्छ भने यि सामानहरू बनाउने कार्यशाला अबश्य हेर्नुहोस । यो कार्यशाला पर्यटकहरूको लागि खुल्ला रहदछ।
खेलौना रेल अर्थात् टोए ट्रेन [सम्पादन गर्ने]
१९२१मा दार्जीलिङ्ग हिमालयन् रेल्वे
सन १९२१मा दार्जीलिङ्ग हिमालयन् रेल्वेइस अच्चम्मको ट्रेनको निर्माण १९ औ शताब्‍दीको उतरार्द्धमा भएको थियो। दार्जिलिंग हिमालयन रेलमार्ग, इंजीनियरिंगको एउटा आश्‍चर्यजनक नमूना हो। यो रेलमार्ग ७० किलोमीटर लामो छ। यो पुरै रेलखण्‍ड समुद्र सतह देखि ७५४६ फीट ऊंचाईमा अवस्थित छ । यस रेलखण्‍डको निर्माणमा इंजीनियरहरूले धेरै नै मेहनत गर्नुपरेको थियो । यो रेलखण्‍ड थुप्रै बाङ्गो-टिङ्गो बाटो त‍था वृताकार बाटोहरू भएर जान्छ। तर यस रेलखण्‍डको सबै भन्द सुंन्दर भाग बताशिया लूप हो। यो ठाउमा रेलखण्‍ड अङ्ग्रजी आठ अंकको आकारमा हुनजान्छ।
तर तपाईं ट्रेनबाट पुरै दार्जिलिंग घुम्न चाहानु हुन्न भने तपाईं यो रेलबाट दार्जिलिंग स्‍टेशनबाट घूम मठ सम्म जान सक्नु हुन्छ । यो रेलबाट यात्रा गर्दै गर्दा तपाईं यसको चारै तर्फको प्राकृतिक दृश्यको आन्न्द लिनसक्नु हुनेछ। यो रेलमा यात्रा गर्नको लागि कि त बिहानै जानुहोस वा अलि साझमा। अन्‍य समय यहाँ धेरै नै भीड-भाड हुनेगर्दछ।
चिया बगान [सम्पादन गर्ने]
दार्जीलिङ्ग एक समय मसालारुको लागि प्रसिद्ध थियो । चियाको लागि नै दार्जिलिंग विश्‍व स्‍तरमा जानिन्थ्यो । ड. कैम्‍पबेल दार्जिलिंगमा ईस्‍ट इण्डिया कंपनीद्वारा नियुक्‍त पहलो निरीक्षक थिए, उनले पहिलो पल्ट लगभग १८३० र ४०को दशकमा आफ्नो बगैचामा चियाको बिउ रोपेका थिए । ईसाई धर्मप्रचारक बारेनस बंधुहरूले सन १८८०को दशकमा आकारको चियाको बिरुवा रोपेका थिए। बारेन बंधुहरूले यस दिशामा धेरै काम गरेका थिए । बारेन बंधहरूद्वारा लगाएको चिया बगान वर्तमानमा बैनुकवर्ण चिया बगान ( टेली: ०३५४-२२७६७१२)को नामबाट जान्न पाइन्छ ।
चियाको पहिलो बिउ चाइनिज झाडीको थियो र यसलाई कुमाऊं हिलबाट ल्याईएको थियो । तर समयको साथ यो दार्जिलिंग चियाको नामबाट प्रसिद्ध भयो। सन १८८६मा टी. टी. कपरले यो अनुमान लगाए कि तिब्‍बतमा प्रत्येक बर्षमा ६०,००,००० lb चिनिया चियाको उपभोग हुदथ्यो। यसको उत्‍पादन मुख्‍यत: सेजहवान प्रांतमा हुदथ्यो । कपरको विचार थियो कि यदि तिब्‍बतका मानिसले चिनिया चियाको ठाउमा भारतको चियाको उपयोग गरे भने भारतलाई एउटा धेरै मूल्‍यावान बजार प्राप्‍त हुदछ । यस पछिको इतिहास सबैलाई थाहा नै छ ।
स्‍थानीय माटो तथा हिमालयी हवापानी कारण दार्जिलिंगको चिया गुणवता उत्तम कोटिको कै हुन्छ। अहिले दार्जिलिंग तथा यसको छेउछाउमा लगभग ८७ चिया कमान छन्। यि कमानहरूमा लगभग ५०००० मानिसहरूलाई काम प्राप्त भएको छ । प्रत्‍येक चिया कमानको आ-आफ्नो इतिहास छ। यसै प्रकार प्रत्‍येक चिया कमानको चियाको किसिम पनि अलग-अलग हुदछ। तरले यि चिया सामूहिक रूपमा दार्जिलिंग चिया 'को नामबाट चिनिन्छन् । यि कमानहरूमा घूम्नको लागि सबैभन्दा राम्रो समय समय ग्रीष्‍म काल हो जब चिया पत्तिहरूलाई टिपिन्छ । हैपी-वैली-चाय कमान (टेली: 2252405) जो शहरदेखि ३ किलोमीटरको दूरीमा छ , सजिलैसग पुग्न सकिन्छ । यहाँ तपाईं मजदूरहरूले चियाको पत्ति टिप्दै गरेको देख्न सक्नु हुन्छ। तपाईं ताजा पत्तिलाई चियामा परिवर्तित हुदै गरेको पनि देख्न सक्नु हुन्छ। तर चिया कमान घूम्नको लागि यि कमानका व्यवस्थापकलाई पहिले नै जानकारी दिनु आबश्यक हुन्छ ।
चिया [सम्पादन गर्ने]
दार्जीलिङ्गको एउटा चियाबारी
नि:सन्‍देह यहांबाट खरीदारीको लागि सबैभन्दा राम्रो वस्‍तु चिया हो । यहाँ तपाईलाई थुप्रै पाउनु हुन्छ। तर उत्तम प्रकारको चिया प्रायजसो निर्यात गरीने गरीन्छ । तर तपाईलाई उत्तम किसिमको पाउनु भयो भने पनि यसको मुल्य ५०० देखि २००० रु. प्रति किलो सम्म हुदछ । सही मुल्यमा रम्रो किसिमको चिया किन्नको लागि तपाईं नाथमुलाज माल जान सक्नुहुन्छ।
चियाको अतिरिक्‍त दार्जिलिंगमा हस्‍तकलाको राम्रा सामान पनि पाइन्छ। हस्‍तकलाको लागि यहांको सबै भन्दा राम्रो पसल 'हबीब मलिक एण्ड संस' (टेली: २२५४१०९) हो जो चौरास्‍ता अथवा नेहरू रोडको नजीकै छ । यो पसलको स्‍थापना सन १८९०मा भएको थियो । यहाँ तपाईलाई राम्रो किसिमको पेंटिग पनि प्राप्त हुन्छ । यस पसलको अलावा तपाई 'ईस्‍टर्न आर्ट' (टेली: २२५२९१७) जो चौरास्‍ताको नै नजीकै छबाट पनि हस्‍तशिल्‍प किन्न सक्नुहुन्छ । नोट: आईतवार पसल बन्द हुने गर्दछ ।
हवाई सेवा [सम्पादन गर्ने]
यो ठाउ देशको सबै ठाउँसग हवाई सेवाबाट जोडिएको छ। बागदोगरा (सिलगढी) यहाको सबैभन्दा नजीकको विमानस्थल (९० किलोमीटर) हो। यो दार्जिलिंगबाट २ घण्‍टाको दूरीमा छ। यहांबाट कलकत्ता र दिल्‍लीको दैनिक उडान सञ्चालित गरिन्छ। यसको अलावा गुवाहाटी तथा पटनाबाट पनि यहांको लागि उडान सञ्चालित गरिन्छ।
रेलमार्ग [सम्पादन गर्ने]
यसको सबैभन्दा नजीकको रेल जोन जलपाइगडी हो। कलकत्ताबाट दार्जिलिंग मेल तथा कामरूप एक्‍सप्रेस जलपाइगडी जादछ। दिल्‍लीबाट गुवाहाटी राजधानी एक्‍सप्रेस यहांसम्म आउदछ। यसको साथै ट्वाय ट्रेन चढेर जलपाईगडीबाट दार्जिलिंग ८/९ घण्टा सम्ममा जान सकिन्छ।
सडक यतयात [सम्पादन गर्ने]
यो सहर सिलगढीदेखि सडक मार्गबाट पनि राम्रोसग जोडिएको छ। दार्जिलिंग सडक मार्ग मार्फत जादा सिलगढीबाट २ घण्‍टाको दूरीमा छ। कलकत्ताबाट सिलगढीको लागि धेरै सरकारी र निजी बसहरू चल्दछन।
मुख्य लेख: दार्जीलिंगको इतिहास
सन् १८८०को दार्जीलिङ्ग
दार्जीलिङ्गको इतिहास नेपाल, भुटान, सिक्किम र बंगालसग जोशिएको छ। दार्जीलिङ्ग शब्द तिब्बती भाषाको दुई शब्द दोर्जे, जसको अर्थ आसीना हुदछ, तथा लिंग जसको अर्थ ठाउ हुदछ, सग मिलेर बनेको छ । यसको अर्थ भयो असिनावृष्टि हुने ठाउ जसले यसको अपेक्षाकृत चिसो वातावरणको चित्र प्रस्तुत गर्दछ। १९औ शताब्दीको पूर्वसम्म यो ठाउ माथि नेपाली और सिक्किमी राज्य राज्य गर्दथे, with settlement consisting ofafew villages of Lepcha woodspeople. सन १८२८मा एक बेलायती इस्ट इन्डिया कम्पनीको अधिकारीहरूको टुकडी सिक्किम जादै गर्दा दार्जीलिंग पुगे र यस ठाउ मै वेलायती सेनाको लागि एउटा अस्पताल (स्यानिटरियम) बनाउने निश्चय।  The Company negotiatedalease of the area from the Chogyal of Sikkim in 1835. आर्थर क्याम्पबेल, कम्पनीको एउटा शल्य चिकित्सक र लेफ्टिनेन्ट नेपियर (पछि रोबर्ट नेपियर, मग्दालाको प्रथम बेरोन) लाई यहाँ हिल स्टेसन बनाउने जिम्मेवारी दिईयो।
सन १८४१मा बेलायतीहरूले यहाँ एक प्रायोगिक चिया कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरे। यस प्रयोगको सफलताको कारण यहाँ १९ औ शताब्दीको दोस्रो भागमा यस सहरमा चिया बगान लगौन् लागे।  दार्जीलिंगलाई बेलायतीहरूले सिक्किमसग सन १८४९मा मे छिनेर लिएका थिए था यस समयमा प्रवासी विषेश गरेर नेपालीहरूलाई बगान, खेती, निर्माण आदि कार्य सञ्चालनको लागि भर्ती गरीको थियो। स्कटिश मिसिनरीहरूले यहाँ विद्यालयको स्थापना र बेलायतीहरूको लागि वेल्फेर सेन्टरको स्थापना गरे र यो ठाउलाई विद्याको लागि प्रसिद्ध गरे । दार्जीलिंग हिमालयन रेल्वेको सन १८८१मा स्थापना पछि यहांको विकास उच्च गतिबाट भयो। सन १८९८मा दार्जीलिंगमा एउटा ठूलो भूकम्प आयो (जसलाई "दार्जीलिंग डिज्यास्टर" पनि भनिन्छ) जसले सहर र मनिसहरूको ठूलो क्षति गर्‍यो। 
बेलायती शासनको अधीनमा दार्जीलिंग पहिला त "नन-रेगुलेसन जिला" थियो ) — तर सन १९०५को बंगाल बिभाजन के पछिदेखि यो राजशाही विभागको अन्तर्गतमा सम्मिलित भएको थियो। 
कंचनजंघा र दार्जीलिंग टाइगर हिलबाट दार्जीलिंगको औशत उंचाई २,१३४ मिटर अथवा ६,९८२ फिट हो। यो ठाउ दार्जीलिंग हिमालयन हिल क्षेत्रमा दार्जीलिंग-जलपहर श्रृंखला मै अवस्थित छ जो दक्षिणमा घुम, पश्चिम बंगालबट उठ्द छ। यो श्रृंखला Y-आकारको छ जसको जग कतपहर और जलपहरमा छ र दुई हातमा उत्तरमा अब्जर्भेटरी हिल के उत्तरबाट जादछ । उत्तर-पूर्वी हात लेबोङमा अन्त्य हुदछ्। उत्तर-पश्चिमी हात नर्थ पोइन्टबाट गएर तक्भेर चिया बगानको नजदीक अन्त्य हुदछ। 
मौसम [सम्पादन गर्ने]
दार्जीलिंग चिया बगान दार्जीलिङ्गको अर्थतन्त्रको दुई प्रमुख क्षेत्र पर्यटन और चिया उद्योग हो। दार्जीलिंग चिया संसारको सर्वोत्कृष्ट कालो चियामा एक मानिन्छ र धेरै प्रख्यात छ, विशेष रूपमा संयुक्त अधिराज्य र अन्य देशमा जहाँ बेलायतीहरूने शासन गरेका थिए। यो चियाको उद्योगमा हालको समयमा भारतको अरु भाग और नेपालको चिया बगानले कडा प्रतिस्पर्धा गरेरहेका छन्।
"टोय ट्रेन" दार्जीलिङ्ग तर्फ जादै गर्दा
दार्जीलिंग सहर ८० कि.मि. (५० मील) लामो दार्जीलिंग हिमालयन रेल्वे (उपनाम: "टोय ट्रेन")को माध्यमबाट सिलिगुडीबाट वा हिल कार्ट रोड भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग (जो रेलमार्गको साथ जादछ) बाट जान सकिन्छ। दार्जीलिंग हिमालयन रेल्वे ६० से.मि. वा २ फिटको नैरो गज रेल्वे हो। यसलाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा स्थलको सूचीमा सन् १९९९मा सूचीकृत गरेको छ, यो विश्वको दोस्रो रेल्वे हो जसलाई यो सूचीम राखिएको छ ।
दार्जीलिंगका विद्यालय या त राज्य सरकार, निजी, तथा धार्मिक सङ्घ-संस्थाहरूद्वारा सञ्चालित छन्। विद्यालयहरूमा पढाउने माध्यम भाषा अङ्ग्रेजी और नेपाली हो, तर राष्ट्रिय हिंदी र राज्य भाषा बांग्लालाई पनि जोड दीइन्छ। विद्यालय या त ICSE, CBSE, वा पश्चिम बंगाल बोर्ड अफ सेकेन्डरी एज्युकेसन सग आबद्ध छन्। बेलायतीहरूको के समर रिट्रिट हुने कारणले दार्जीलिंग मै इटन कलेज, ह्यारो स्कूल र रग्बी स्कूलको ढांचेको पब्लिक विद्यालयको स्थापनाको ठाउको रूपमा छनिएको हो । यो ठाउमा भारत स्थित बेलायती अधिकारी आफ्नो बाल-बच्चालाई शिक्षा दिनको लागि पठाउदथे। विद्यालय जस्तो कि सेन्ट जोसेफ कलेज , लोरेटो कन्भेन्ट,सेन्ट पलज् स्कूलर माउन्ट हर्मन स्कूल दक्षिण एसियाको धेरै ठाउहरूबाट विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्ने गर्दछन। धेरै विद्यालयले (केहि सय सालभन्दा पनि पुराना) अहिले पनि बेलायती र उपनिबेशिय सम्पदालाई जिबनतता दीइरहेका छ । दार्जीलिंगमा ३ वटा कलेज छ — सेन्ट जोसेफ कलेज, लोरेटो कलेज और दार्जीलिंग सरकार कलेज — यो सबै उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, सिलिगुढीसग आबद्ध छ।
सन्दर्भ सामाग्री [सम्पादन गर्ने]
बाहिरी सूत्र [सम्पादन गर्ने]
दार्जीलिङ्ग समाचार (अङ्ग्रेजी)
"http://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=दार्जीलिङ्ग&oldid=337634" बाट निकालिएको	श्रेणीहरु: पश्चिम बङ्गालको नगरपश्चिम बङ्गालभारतको नगरपर्यटन	नेविगेशन मेनू
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०६:०८, ९ मे २०१३ मा परिवर्तन गरिएको थियो।